induction Bond ပလပ်စတစ်, ပလပ်စတစ်နှင့်အတူဘွန်းသတ္တု
ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / induction Bond / induction Bond
အမျိုးအစား: induction Bond Tags: Bond, အပူသော induction bonding, ပလတ်စတစ်, ပလတ်စတစ် bonding, သော induction Bond, ပလတ်စတစ် induction bonding, induction အပူ bonding, ပလပ်စတစ် bonding သော induction
induction Bond Bond ကော်ကုသပေးဖို့သော induction အပူအသုံးပြုသည်။ induction ထိုကဲ့သို့သောတံခါးများ, တစုံတရာပေး, အကာအရံ, rearview ကြေးမုံနှင့်သံလိုက်အဖြစ်ကားတစ်စီးအစိတ်အပိုင်းများအဘို့ကော်နှင့် sealants ကုသမှုအတွက်အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ induction လည်း composite- မှသတ္တုနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ-to-ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအဆစ်အတွက်ကော်ကုသပေး။ မော်တော်ယာဉ်စဘွန်းနှစ်ခုအဓိကမျိုးရှိပါတယ်: spotbonding, ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးခံရရန်ပစ္စည်းအသေးအစိတ်အပိုင်းများတွင်စတင်အရာ; ပြီးပြည့်စုံသောအဆစ်တွင်စတင်ထားတဲ့ Full-လက်စွပ် Bond ။
သတ္တုနှင့်အတူ induction Bond ပလပ်စတစ်
ထားဝယ် induction Bond စနစ်များ တစ်ဦးချင်းစီ panel ကိုများအတွက်တိကျသောစွမ်းအင်သွင်းအားစုအာမခံပါသည်။ အသေးစားအပူထိခိုက်ဇုန်စုစုပေါင်း panel ကို elongated minimize ။ သံမဏိပြား bonding တဲ့အခါမှာညှပ်ဖိစီးနှင့်ပုံပျက်မှုကိုလျော့နည်းစေသော, မလိုအပ်နေပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို panel ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင် input ကိုသွေဖီသည်းခံစိတ်အတွင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ Full-လက်စွပ်ဘွန်းနှင့်အတူတစ် sizefits- အားလုံးကွိုင်အားလပ်ချိန်မှာကွိုင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းလျော့နည်းစေသည်။
induction အပူ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ဦးစားပေး Bond နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်သံမဏိနှင့်လူမီနီယံစာရွက်သတ္တုဘွန်းဖို့အသုံးပြု, induction ပို. ပို. သစ်ကိုပေါ့ပါးပေါင်းစပ်နှင့်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပစ္စည်းများဘွန်းမှအလုပ်ခန့်သည်။ induction အဆိုပါ electrotechnical စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကွေး strands, ဘရိတ်ရှူးဖိနပ်များနှင့်သံလိုက် Bond ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအဖြူကုန်ပစ္စည်းများကဏ္ဍတွင်လမ်းညွှန်များ, သံလမ်း, စင်ပေါ်နှင့်ပြားအတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။
အဆိုပါ DW-လှိုင်းနှုန်းသည် UHF နှင့် DW-HF စီးရီးမူလတန်းများမှာ သော induction အပူပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ သော induction Bond application များအတွက်။